မိတ္ထီလာကယ်ဆယ်ရေး | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
ရွှေအရောင်းအဝယ်ပြုရာမှ ပဠိပက္ခများ ဖြစ်ပေါခဲ့သော မိတ္ထီလာမြို့ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၂၁ ကျောင်းတွင် ဒုက္ခသည် ၄၅၀၀ ကျော်နင့် ခရိုင်အားကစားကွင်းရှိ ဒုက္ခသည် ၂၀၀၀ ခန့်ကို ကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းများ ကိုဆောင်ရွက်ရန် သံင်္ယာတော်များ ၊ဒေသအာဏာ
ပိုင်များးနင့် မြိုခံလူမှုရေး အဖွဲအစည်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ ကြောင်း မိတ္ထီလာမြို့ခံ The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပိုသည်။
အရေးပေါအခြေအနေ ကြေညာပြီးနောက် မိတ္ထီလာမြို့တွင် တည်ငြိမ်အေး
ချမ်းမှုများပြန်လည်ရရှိစေရန်အတွက် အမှတ်၇၇ ခြေမြန်တပ်မလက်အောက်
ခံ တပ်ရင်းများ၊ မိတ္ထီလာ အခြေစိုက် အမှတ် ၉၉ ခြေမြန် တပ်မ လက်အောက်
ခံတပ်ရင်းများသာမက တပ်မတော် (လေ )တပ်ဖွဲဝင်များ က လုံခြုံရေးဆောင်
ခရိုင်အားကစားကွင်းက မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ဒုက္ခသည်တွေကို ဘုန်းတော်ကြီးတွေက သွားရောက်အားပေး နေတယ်။အမိုးအကာတွေ ခုထိမရသေးဘူး၊ ရေသန့်ဗူးတွေ ဆန်အိတ်တွေ ပေးနေတယ်ဟု The Voice Weekly သတင်းထောက်က ဆက်လက်သတင်းပေးပိုသည်။
မိထ္တီလာမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် မတ် လ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းအထိ သေဆုံးသူ ၁၁ ဦးရှိပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၃၉ ဦးရှိကြောင်းနှင့် ပဋိပက္ခကြောင့် ပျက်ဆီးမှုအနေဖြင့် နေအိမ် ၁၅၁ လုံး၊ မော်တော်ယာဉ် ၁ စီး၊ ပညာရေးမှူးရုံး ၁ ရုံး၊ ဆိုင်ကယ် ၁ စီး၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ် ၂ စီး၊ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ ၁၃ လုံး ပျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Recently, MeikHtiLar (Mandalay Division) is under control by government. Refuge camp are there and people round about 9000 are need help. They don’t have house, they don’t have food to eat. They are human. They don’t have even water to drink.
About this riot, 11 people died, 39 people injured, 151 houses are burned, religious building 13 are destroyed.
This entry was posted in မြန်မာသတင်း, News and tagged မိတ္ထီလာ ကုလား ဗမာ အရေးအခင်း, မိတ္ထီလာ အရေးနောက်ကွယ်, မိတ္ထီလာသတင်းဓါတ်ပုံများ, မိတ္ထီလာအရေးအခင်း, Blogger Shwe Htoo, Blogger Shwe Htoo at Meik Hti Lar, Emergency Rescue is need in Meikhtila, Myanmar News, Rescue Meikhtila, Rioting in Burma on March 23, 2013 by koshwehtoo.
← အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ မိတ္ထီလာ ဦးနေဝင်း →
One thought on “မိတ္ထီလာကယ်ဆယ်ရေး”
သောင်းထွန်း March 24, 2013 at 12:38 pm